Tezitra Noho Ny Fahatarana Adiny 2, Mpanao Politika Pakistaney Nosakanan’ireo Mpandeha Tsy Hiditra Ao Anaty Fiaramanidina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2014 3:26 GMT
Nalaza tao amin'ny ateriento ny lahatsary tamin'ny finday mampiseho ireo mpandeha fiaramanidina tezitra nandroaka mpanao politika malaza iray ao Pakistana, Rehman Malik, tamin'ny Zotram-piaramanidina Pakistan International Airlines (PIA) hiainga ao Karachi hisidina ho any an-drenivohitra, Islamabad.
Efa mahazatra ny fahataran'ny fiaingan'ny zotram-pirenena an'habakabaka Pakistana noho ireo mpanao politika na olona manana fifandraisana ambony. Tsy mazava kosa raha nahemotra noho i Malik ny PK 370 na noho ny olana ara-teknika, izay efa mahazatra ihany koa. Saingy nanapa-kevitra ny sasany tamin'ireo mpandeha tezitra tamin'ny zotram-piaramanidina fa noho ny fahadisoan'i Malik no nahatonga ny fahatarana adiny roa ary nosakanan'izy ireo tsy hiditra tao anaty fiaramanidina izy. Taorian'ny zava-nitranga, nisioka i Malik fa tsy misy idirany ny fahataran'ny fiaingana.
Araka ny filazan'ny mpisera DailyMotion Minator90210, izay namoaka andiana lahatsary tamin'ny finday tao anatin'ny fiaramanidina, nilaza tamin'ireo mpandeha ny mpiasan'ny zotram-piaramanidina tany am-boalohany fa noho ny olana ara-teknika no mahatonga ny fahatarana. Saingy nanomboka ny buzz tao anaty fiarahamanidina fa noho ny mpandeha VIP, minisitry ny atitany teo aloha Rehman Malik, izay tara fahatongavana no nahatonga ny fahatarana.
Tao anatin'ny adiny telo nandefasana ny lahatsary tao amin'ny habaka Daily Motion, maherin'ny 53.000 ireo olona nijery ilay lahatsary tamin'ny finday mampiseho an'i Rehman Malik nifanatrika tamin'ireo mpandeha tezitra. (Voaràra ao Pakistana ny YouTube, saingy nalefa tao koa ilay lahatsary.)
Re mazava ny feon'ireo mpandeha tezitra vitsivitsy saingy tsy hita kosa ny tavan'izy ireo ao anatin'ilay lahatsary amin'ny finday, izay nalaina teo amin'ny fidirana ao anaty fiaramanidina mifandray amin'ny tetezana fiampitàna (jet bridge). Mpandeha iray miteny anglisy nilaza hoe , “VIP hono. Hatonoko izy. Tsy manahy ve ianao. Rehefa miditra izy.”
Mpandeha tezitra iray hafa nitabataba tamin'ny teny Urdu hoe, “Andriamatoa, tokony hisy olona hitono ireo ampondra ireo. Taraiky adiny 2-3 hatrany isika noho izy ireo.”
Nanaraka niteny ihany koa ireo mpandeha maromaro vitsivitsy, nameno ny tenin'ireo sasany, “Hainay nandritra ny 68 taona izany (kolontsaina VIP) izany [fotoana naha-mahaleotena an'i Pakistan]. Mbola haka 68 taona hafa indray ve isika?”
Satria hita mandeha amin'ilay tetezana fiampitàna mankao amin'ny voromby i Malik, mpandeha iray nilaza tamin'ny teny Urdu hoe “Tonga izy, tonga izy.”
Nanomboka niampanga sy nitabataba tamin'i Malik ireo mpandeha tezitra noho izy nanemotra ny fiaingan'ny fiaramanidina nandritra ny adiny roa. Niverina avy hatrany niaraka tamin'ny manodidina azy i Malik alohan'ny hidirana ao anaty fiaramanidina.
Re tezitra miteny ratsy an'ilay minisitra avy any aoriana ireo mpandeha sasany. Niala-tsiny noho ny teny mahery nataony ilay mpandeha nampanantena hitono azy ary niezaka nitony tamin'ny feony, saingy niezaka nanakana azy ny mpiasa iray tao amin'ny zotram-piaramanidina, ary mbola nitabataba tamin'i Malik ihany izy hoe: “Andriamatoa, alohan'ny hiverenanao, tokony hanao azafady amin'ireo mpandeha ireo ianao! “
Niverina vetivety fanindroany i Malik, tsy renay izay nolazainy. Hoy ilay mpandeha nanohy “, Rehman Malik, mpandeha 250 no nihemotra fiaingana noho ianao. Miala tsiny aho. Fahadisoanao izany andriamatoa. Tokony ho menatra ny tenanao ianao. Andriamatoa Malik, tsy minisitra intsony ianao. Ary na dia minisitra aza ianao, tsy raharahanay! Ianao olombelona dia tokony mitsinjo ny maha-olona. Miverena any an-tanety! “
Satria nivoaka i Rehman Malik, mpandeha iray niteny hoe: “Hidio ny varavarana ary alefaso hisidina hoany Islamabad ity voromby ity. Tokony ho [fantatra] sy raketina izany, navoaka i Rehman Malik. Natsipinay any ivelany izy!”
Rehefa voaroaka tao anaty fiaramanidina i Malik, niditra tao amin'ny Twitter ity mpanao politika ity mba hanome ny fanazavany hoan'ireo mpanjohy azy maherin'ny 200K :
Sady tsy VIP aho no tsy mitondra tena tahaka ny VIP. Mandray fiaramanidina amin'ny kilasy ekonomika aho. Nahita mpandeha roa mihery fiteny tao amin'ny Pakistan International Airlines (PIA) aho. Nahita azy ireo aho ary niverina tao amin'ny efitra fipetrapetrahana.
Tsy nahemotra noho ny amiko ny zotram-piaramanidina PIA. Nahita lehilahy iray toa mamo mitabataba tamin'ny PIA aho ary nanapa-kevitra hiverina satria nikatona ny varavarana
Efa nambara fa tara nanomboka tamin'ny 6 ora hariva ka hatramin'ny 8:30 ora ny fiaingan'ny zotram-piaramanidina. Mba nijaly ihany koa aho. tonga tamin'ny 8:35 ora aho. Noheverina am-pahadisoana fa noho ny amiko ny fahatarana
Nandefa lahatsary roa hafa avy ao anatin'ny fiaramanidina talohan'ny fandroahana an'i Rehman ihany koa i Minator90210. Tamin'ilay voalohany, miezaka manamafy ireo mpandeha raha avy amin'i Rehman Malik no mahatara ny fiaingana; nomena lohateny hoe «Miezaka manafina ny momba an'i Rehman Malik ireo manampahefan'i PIA:”
“Iza no nahatara ny fiaingan'ny fiaramanidina? Rehman Malik? Manontany ilay kapiteny teo akaikin'ny varavaran'ny voromby ao amin'izao fotoana izao. Lazao i Rehman Malik mba handray fiara fitateram-bahoaka mankany Islamabad. Tsy rariny izao”, hoy ny mpandeha iray tao anatin'ilay lahatsary. Mpisolovava iray nilaza hoe, “iza no hiaro ahy rahampitso, ny raiko? Manana asa atao aho!”
Lahatsary faharoa nalefan'i Minator90210 kosa mampiseho mpanao politika iray hafa avy amin'ny antoko PML-N Ramesh Kumar Vankwani miditra tara ao anaty fiaramanidina ihany koa. Nanontany ny momba azy ireo mpandeha ary niampanga azy ho miaraka amin'i Rehman Malik; namaly izy fa anisan'ny mpandeha ao anatin'ny fiaramanidina tokoa i Rehman Malik saingy tsy miaraka aminy. Tsy resy lahatra tamin'ny valinteniny ireo mpandeha ary nandroaka azy tao anaty fiaramanidina ihany koa, sady nitabataba hoe “mahamenatra, mahamenatra, mahamenatra, mivoaha ato anaty fiaramanidina.”
Efa minisitry ny atitany tao Pakistan tamin'ny taona 2008 hatramin'ny 2013 i Rehman Malik, ary mpitari-dalana tamin'ny ady amin'ny fampihorohoroana tao amin'ny firenena nandritra ny governemanta farany notarihin'ny Antokom-bahoaka Pakistaney (PPP). Niverina teo amin'ny sehatry ny politika indray i Malik mba hiezaka hanampy ny governemantan'i Nawaz Sharif amin'izao fotoana hifampiraharaha amin'ireo mpanao politika mitarika fihetsiketsehana goavana manohitra ny governemanta ao Islamabad, izay nahazo mpanao fihetsiketsehana an'aliny manerana ny firenena, miaraka amin'ny teny filamatra miampanga ny kolikoly, ny VIP ao Pakistan ary ny kolontsaina mizahozaho (ao amin'ny mpitondra).